Oleedị Ihe Chineke Bu n’Obi Kee Anyị? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mapudungun Mongolian Moore Myanmar Nepali Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
E nwere ụzọ ọzọ e nwekwara ike isi jụọ ajụjụ a. Dị ka ihe atụ, Gịnị ka Chineke chọrọ ka m jiri ndụ m mee?” Ihe Baịbụl kwuru na-egosi na ihe Chineke bu n’obi kee anyị bụ ka anyị na ya bụrụ enyi. Legodị ihe ndị a Baịbụl kwuru.
Ọ bụ Chineke kere anyị. Baịbụl kwuru, sị: “Ọ bụ [Chineke] kere anyị, ọ bụghị anyị kere onwe anyị.”—Abụ Ọma 100:3; Mkpughe 4:11.
Chineke nwere ihe o bu n’obi kee ihe ọ bụla o kere. O nwekwara ihe o bu n’obi kee ụmụ mmadụ.—Aịzaya 45:18.
Chineke kere anyị ka “mkpa ime mmụọ” na-akpa anyị. Otu ihe so ná mkpa ime mmụọ anyị bụ ịmata ihe mere Chineke ji kee anyị. (Matiu 5:3) Chineke chọkwara ka anyị mata ihe ahụ.—Abụ Ọma 145:16.
Otu ihe anyị ga-eme iji gboo mkpa ime mmụọ anyị bụ imete Chineke enyi. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ ndị nwere ike iche na anyị agaghị emeteli Chineke enyi, ma Baịbụl na-agwa anyị, sị: “Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga-abịarukwa unu nso.”—Jems 4:8; 2:23.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ enyi Chineke, anyị ga-eme ihe ọ chọrọ ka anyị mee. Baịbụl gwara anyị ihe Chineke chọrọ ka anyị mee n’Ekliziastis 12:13. Ọ sịrị: “Tụọ egwu ezi Chineke, debekwa ihe o nyere n’iwu. N’ihi na ọ bụ ya bụ ọrụ dum dịịrị mmadụ.”
N’ọdịnihu, Chineke ga-ewepụ ahụhụ ma mee ka ndị enyi ya, ya bụ, ndị niile na-efe ya nweta ndụ ebighị ebi. N’oge ahụ, anyị ga-amatakwu ihe mere Chineke ji kee mmadụ.—Abụ Ọma 37:10, 11.